အာဖရိကရိုးရာအုပ်ချုပ်မှု၊ ပန်အာဖရိကန်နှင့်ဒီမိုကရေစီ - Afrikhepri Fondation
ရိုးရာအကြီးအကဲများ, Panafricanism & ဒီမိုကရေစီိံ
Par အဘူ Tchebayou
နှစ်နှစ်လျက်အနိစ္စမရောက်မှီငါသည်သူ၏အဘုရင်မင်းမြတ် Fondjomekwets ၏ရှင်ဘုရင်, ငါ့အဘိုးသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူကသူ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဒူအာလာအတွက်လျင်မြန်စွာဟိုတယ် Hila ၌ငါ့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာသောကြာနေ့နံနက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရှငျဘုရငျတို့ထံအပ်နှံပုံမှန်အတိုင်း salut နှင့်အတူအခြေခံသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်းနေကမ္ဘာကြီးကို View - Ohgiaha (သင်ငါ့ကိုသိသလား?) - Chisiele (ထိုင်-အထိ) သူပြောတယ်။ စာဖတ်သူကိုသောအခါမှမ, ငါစကားပြောဆိုမှုသည်အောက်ပါပွငျသစျထဲတွင်ဘာသာပြန်ဆို။ - တိုင်းပြည်ဘုရင်ငါ Mbeuh လက်မ fo O. ၏ရာထူးမှထမြောက်တော်မူသည်ငါ့ mom, များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဤဝေါဟာရကိုမှူးမတ်ဖွင် "ဟုပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။ "- အမျှ-သလော သူကပြောတယ်။ - ငါ့ရှင်ဘုရင်က, ငါသည်သင်တို့ကိုအများကြီးကိုးကွယ်။ ငါကပြောကြားသည်။ - ရှင်ဘုရင်သည်ကိုချစ်သောသူတို့အားကမကြိုက်ဘူးသောသူတို့၏အမျိုးအပေါငျးတို့သလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ သူကပြောပါတယ်။ ငါကသူ့စိတျအပိုငျးအပေါ်တစ်ဦး condescension ပါလိမ့်မယ်သူငါ့ကိုဒီဆုကြေးဇူးကိုပေးနိုင်ဘူး "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဟုပြောသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါ enchainai - ငါနိုင်ငံများသို့သောပူဇော်ရမည်လှူဒါန်းမှုကိုချစ်နိုင်တော့တာသေချာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်လတံ့သောမိမိအအသက်အရွယ်များအတွက်မေးမြန်းဖို့တလမ်းတည်း? သင်ဆဲသင့်ရဲ့မင်းညီမင်းသားတွေထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကိုသင်၏အိမ်ခြံမြေများအတွက်သံတမန်ရေးရာစစ်ကိုလျစ်လျူရှုသည်မဟုတ်လော တစ်ခုချင်းစီကိုမင်းသားသူ့ကိုယ်သူရှင်ဘုရင်ကသရဖူဆောင်းမြင်သည်။ မင်းသားယဉ်ကျေးပြောကြားခဲ့သည်ဘာကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုဖုံးကွယ်။ ထိုသို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ဖြေဆိုရန်ဟုအဘယ်အရာကိုရန်ဒီကုဒ်ပါတီများ၏တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကဤအချက် မှစ. , ငါ့အဘိုးထိန်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူငါ့အားပြောဆို၏ - တိုင်းပြည်လသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏သူတဦးတည်း, ဤသူပြီးသားရှငျဘုရငျသစျသောကွောငျ့ပြောနေတာကိုရှာဖွေမယ့်သောတဦးတည်းဖြစ်၏။ - ဒါကြောင့်တစ်လူဆိုးဂိုဏ်းဇာတ်လမ်းရဲ့ငါစဉ်းစားမိတယ်။ ငါဒါတည်ဆောက်ခြင်းငှါမြင်ကွင်းများကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါ boldest မှူးမတ်တို့သည်မူပိုင်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လျော့နည်းနိုင်ပါယုံကြည်သောသူသူတို့မင်းပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ဝေးလံသောတော်ဝင်မိသားစု၏ဒြပ်စင်များနှင့်ပင်အချို့အထူးသနေစဉ်အတွင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ငါမျှော်လင့်ထားသည့်ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်းကလူ "ဟုပြော - ကျနော်တို့ရွာကနေတစ်စုံတစ်ဦးကိုအလိုရှိ၏။ "ဤစကားသည်အဘယ်သူ၏မိခင်ရွာအပြင်ဘက်ရှိကြ၏မှူးမတ်များ၏နားရွက်မှဿုံတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ အာဏာကိုအောင်မြင်ပြီးများအတွက်ရုန်းကန်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီတရားဝင်ရည်မှန်းချက်ကြီးယောက်ျားလေးများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိ၏။ မတရားဒေသခံအစဉ်အလာအားဖြင့်တော်ဝင်မှဖယ်ထုတ်လိုက်မိန်းကလေးငယ်များ၏ချီတက်ပွဲလည်းရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရေးအောင်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုချင်းစီမှ၎င်း၏မိခင်ညီအစ်ကိုတွေရဲ့တဦးတည်း designates ။ ယင်းမင်းသမီး၏တစ်ဦးက "ဘုရင်ခြိမ်းခြောက်ဖို့ချီတုံချတုံမပြုခဲ့ - သင်ဖို့ကျွန်မကိုပါစေ? ငါ CPDM ရေးရာ Yaounde ဝန်ကြီးများ၌ငါ့တင်းပါးကိုဖွင့်။ "။ အာဏာရတော်ဝင်မိသားစုကိုရှငျဘုရငျ, သူ့မယားများနှင့်သူ့သားသမီးများ၏ပါဝင်ပါသည်ကြောင်းရှင်းပြပါ။ တော်ဝင်တရားရုံးမှာမိခင်တစ်ဦးနှင့်သူမ၏ကလေးများကမိသားစုဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအာဏာကိုအဘို့ဤစစ်တိုက်သာနှုတ်မဟုတျကွောငျးအကြှနျုပျကိုပုံရသည်။ ဒီ Mele ၌ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးက, ဒီတာဝန်များအတွက်အလှအပ, ညှဉ်းဆဲခြင်းကို, သီလနှင့်ရှေ့မှောက်တွင်အဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစပ်သောတစ်ဦးတည်းသာ။ အခြားအကြီးပျော်စရာနှင့်အစညျးလုံး Tribune, အခွင့်အလမ်း "toutoue" အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ တစ်သားကောင် thoughtfully declaims ရှိရာတစ်ဦးကခရီးသည်ပြည်နယ်ပေမယ့်မသက်ဆိုင်သည်သူ၏အလိုတော်အမည်မသိအော်ပရေတာ၏စကား။ Il avait commis la bêtise de dire au roi « il te faut déjà me laisser la place » Toutes ces choses me traversèrent la mémoire en un temps éclaire. Je dis alors : Roi du pays, es-tu certain d’avoir donné dans l’exercice de ta fonction tout le meilleur dont tu es capable ou bien, est-ce que tu penses que le meilleur est à venir pour Fondjomekwet ? ဤမေးခွန်းအတွက်သူငါသညျသူ၏စံချိန်အကြောင်းကိုမေးတော်မူလျှင်ကြတယ်။ သူကဖြည်းဖြည်းချင်းညာဘက်ကို left ကနေမိမိခေါင်းကိုလှည့်နဲ့ကျွန်မလိုချင်တာတွေစားသောက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရပ်နေနှင့်ကျွန်တော်ငါ့အားဝတ်ပြုတဲ့ဘာသာရပ်မေးတယ်။ ဒီလိုမျက်နှာသာထိုက်မှသူမ၏ဘုရင်မင်းမြတ်မှအဘယ်သို့ပြုမိခဲ့သလဲ ကျွန်မပြောပြနိုင်ဘူး။ သို့သော်တစ်ဦးချော့မော့တတ်သောအပြုံးနှင့်အတူနှစ်ခုမှူးမတ်တို့သည်ငါ့စားပွဲ၌မှငါ့ကိုဆည်းကပ်။ ငါအလေ့အကျင့်ကိုကြှနျုပျတို့ရှငျဘုရငျအတှကျပေးစရာမလိုပါကြောင်း, တစ်ဦးမသက်မသာအခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ စညျးစိမျဥစ်ဖြစ်ခြင်း, ငါသည်ရှင်ဘုရင်အကြှနျုပျ၏ဥပဒေကြမ်းစားသောက်ဆိုင်ပေးဆောင်ကြည့်ရှုရန်သရေရှုတ်ချခြင်းမှအကြှနျုပျကိုဖုံးသောဘာမှမစားရ သာ. ကောင်း၏ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မအခန်းထဲသို့ချိုးဖျက်ဖို့မေတ္တာပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုမြင်သောအခါငါသည်ဤအတှေးထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမ၏ဆီသို့တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှု လုပ်. လင်းလင်းအခြေအနေကသူ့ကိုပြောသည်။ သူမသည်ထို့နောက်သူ့အခန်းမှဖြည့်စွက်သူ့ကိုရောက်စေဖို့ဆာဗာမေးတယ်။ ငါတိုးမြှင်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အတူယခုအချိန်တွင်ငါ၏အဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက်မှထို့နောက်ပြန်လေ၏။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ရွေးချယ်မှုမှာစားပွဲမကြာမီပြည့်စုံလေ၏။ La conversation s’enchaînait de plus belle. ထိုမှတပါးငါ့အမှူးမတ်တို့သည်သူတို့အဘနဲ့ငါ့ဖလှယ်မှုမတိုင်မီဘာမျှရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါရှင်ဘုရင်နှင့်အတူစကားပြောပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ပျင်းစရာကောင်းသလိုပဲသူတို့နှင့်အတူစကားပြော။ Aussi je répondais laconiquement à leurs sophismes et présomptions. Tu trouves ? C’est cela même. - ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါသည် ... ထိုသူတို့က, ငါသည်သူတို့နှင့်အတူမဟုတျကွောငျးဖွငျ့မွငျနိုငျသကဲ့သို့ငါဤသူတို့ကိုငါ့အားအပြန်ဆုတ်တယ်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြန်သွားကြ၏။ ဒါကြောင့်ဘယ်လို Banja ၏မြို့တော်ဝန်ဦးထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့သူသည်ငါ့အဘိုးဘုရင်ကမျှအလားအလာလမ်းအိမ်မှာရှိပါတယ်လော ခြောက်သွေ့ရာသီများတွင်ဖုန်မှုန့် 20 စင်တီမီတာအထူရာအရပျရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီလမ်းကြောင်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းပတျဝနျးကငျြကိုတောင်ပေါ် aplenty နေစဉ်မိုးရာသီရာသီဥတုမှာ, ကားတစ်စီးထဲတွင်လမ်းလျှောက်လုပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ကြောကျခဲကြောကျခငျးလမျးကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်နည်းစနစ် 20 000 နှစ်ပေါင်းဘီစီကျော်ဘို့ရှိခဲ့သညျ။ ငါရှင်ဘုရင်သည်အခန်းထဲရှိရောက်လာသောအခါ, အတွေးဤမျိုး၌ရှိ၏သူ့ကိုမှငါ့ကိုမခေါ်ဆိုပါတယ်: - ဘာတိုင်းပြည်လုပ်ဖို့တို့သညျ လာ. ငါငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဘယ်သူနည်း - ရှင်ဘုရင်သည်တိုင်းပြည်ကိုအပေါငျးတို့သညျကောငျးသောအထက်ပါ! ငါကပြောကြားသည်။ - သင်နားလည်ပါနဲ့! ဟုသူကပြောသည်နှင့်အရပ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဒါဟာငါသညျသူ၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားကြောင်းကွောနှင့်အတူရှိ၏။ ကျွန်မအင်တာဗျူးရဲ့အစမှာဖွစျကွောငျးမေးခွန်းများကိုကျွန်မမေးခွန်းထုတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါစားသောက်ဆိုင်ထားခဲ့ပါစေသောမေးခွန်းရွာသားများထံတော်ဟုခဲ့သူမ၏ဝေဖန်မှုများနှင့်စွပ်စွဲမှုများအတွက်နိုးခဲ့ကြောင်းနှင့်ပေးသောသူသည်ပညာအတတ်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူသည်ငါဖြစ်သည့်ဘေးထွက်သိရန်ပြေလည်။ သူကကျွန်မတစ်ဦးသည်သူ၏ရန်သူကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာစပ်စု Admiral ခဲ့လျှင်သိကြစေချင်တယ်။ ငါ့ဦးခေါင်းကတဆင့်မြို့အတွက်အတိုက်အခံပါတီတင်သွင်းဘို့လေဖြတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သောကျေးရွာသားများ၏ပုံသဏ်ဌာ။ ငါ၏အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိရှိသည်သူ၏မေးခွန်းကိုငါ့အဖြေကို၏အသုံးအနှုန်းအပေါ်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြောပြပါ။ အပြင်, ငါမဟုတ်ရင်ဖြေဆိုရကြမည်လော မည်သည့်ဝေဖန်မှုဖြစ်နိုင်သောခဲ့ကြောင်းယူဆ။ အကြှနျုပျ၏အဖိုးမကြာမီ tu သြတ္တပ္ပစိတ်သည့်အခါကောင်းသောနာရီသပိတ်လိုရှိ၏။ မြင်ကွင်းကဤအချက်ကနေမေးခွန်းသူ့ဟာသူအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုကသူ့ဘာသာရပ်များ၏ inertia ဖြင့်၎င်း၏အရေးမယူအပြစ်လွတ်စေဆိုဖှယျကြောင်းသူ့ကိုပြောပြရန်တစ်ဦးယဉ်ကျေးပုံသေနည်းကိုရှာဖွေပညာရှိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်ဘုရင်ကသူတစ်ဦးပန်ကာများ၏ရှေ့မှောက်၌မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းကိုမေ့လျော့မရနိုငျဘဲ, ဒီ 35 ငါဖြစ်ရပ်များများ၏ဖိအားပေးမှုအောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကိုကြည့်ပါရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးနှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏မေးခွန်းကိုငါ့အဖြေကိုငါ့အအန္တရာယ်ကင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့အားမျက်စိ၌ငါတစ်ဦးပြိုင်ဘက်သကဲ့သို့ငါ၏အခန်းကဏ္ဍ ယူ. ကိုယ်တော်၌မိမိတိရစ္ဆာန်နှိုးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အနေအထားအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်လျှင်ဖိနှိပ်မှုအပေါ်တော်ဝင်အနုပညာမှာပြိုင်ဘက်လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အဘို့အမြင့်မားနှင့် ပတ်သက်. ရှိခြင်းအားရှင်ဘုရင်သည်ဤနည်းဥပဒေကိုချိုးဖျက်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဂုဏ်အသရေရဲ့ margin ငါ့အဘို့ရှိ၏။ ငါသူသည်နိုင်ငံ၏ကောင်းသောကြောင်းကိုဟုဆိုကာ, ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်၏။ ဒါ့အပြင်သူ၏နှုတ်၌, "သင်နားလည်" သင်ကြိုတင်သတိပေးမှုမရှိနေနှင့်သင်တို့အဘို့ကောင်းပါတယ် "ကိုဆိုလိုသည်။ "ဒါကြောင့်ငါကအောက်တန်းသူရဲဘောနည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟိုတယ်အတွက်ထိုအချိန်က becaufe အရေးတကြီးနောက်ဆုံးမှာနေ့၏ကြွေးမြီ၏ extension ကိုရရှိရန်ဟောင်းရငျးနှီးကိုရှာဖွေခဲ့ကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသေချာကြိုတင်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ seductive အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ, အဲဒီတခါတရံတခုပင် သာ. ကြီးမြတ်အရှက်မှတင်သွင်းပါတယ်။ သို့သော်သမျှဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုပြီးသားငါ့အသည်းခံစိတ်ဝယ်ကြပါလိမ့်မယ်။
မိမိအ Kamga ဒါဝိဒ်သည်တန်ခိုးအာနုဘော်, fondjomekwets ၏ရှင်ဘုရင်ဒီဇင်ဘာလ42008 အပေါ်အနိစ္စရောက်လေ၏။ အဆိုပါအခမ်းအနားပူးတွဲရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသောဆက်ခံဇန်နဝါရီလ42009 အပေါ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်ရန်။ ငါမဆိုလေးနက်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ woo မဟုတ်ပြေလည်။ ငါကမလိုအပ်ဘဲမူပိုင်အထံတော်သို့ကျဆင်းသွားခဲ့သောငါ၏ hunch ကို sniff စေပါလိမ့်မယ်။ ငါထို့နောက် coveted ဒီတာဝန်ခံ၏အရှုံးအပြီးသူ့ကိုနှစ်သိမ့်သွားကြဖို့အတင်းအကျပ်ခံစားရပါလိမ့်မည်။ ငါအရမ်းပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတစ်ဦးဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ 475 လူတွေနိမ့်ဆုံး t ကိုဒီတာဝန်ကဘုရငျယူဆဖို့အစပိုင်းတွင်နိုင်ခြင်းဖြစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရဖို့ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဒါငါမအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ Fondjomekwet မှာတနင်္ဂနွေ, ငါဘေးကနေပါလိမ့်မယ်။
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာမပြေးဝံ့အရာကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။9ရက် "ည" မတိုင်မှီငါပွဲအတွက်လိုအပ်သောအလုပ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ခရီးထွက်မူသောငါ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ စကားတော်ဟေး "တစ်ဘစ်စထရိုBépandaဒူအာလာဖြတ်သန်း! Whoweoui Aboubakar "အထဲကအသံ (အဲဒီမှာ? ရဲ့) ။ ငါကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းစွာလှပသူ့ကိုခဲ့တဲ့ဝတ်စုံအတွက်မင်းသားကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါနဲ့အော် - Miehou (သူ့ High) သင်မည်သို့ရှိပါသလဲ - အကြားနှင့်နေရာယူ! သူကပြောပါတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဤသည်မှာ။ သူကချက်ချင်းကျနော်တို့ငါ့ကိုကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုအစေခံစေခြင်းငှါအမိန့်ကိုပေး၏။ ဒီအပြုလေ၏။ - ဒါဟာသင်ကမ်းလှမ်းသူဘုရင်, fondjomekwets ၏ရှင်ဘုရင်ပါ! သူကပြောပါတယ်။ ကျွန်မ "သူ့ဖွဲ့" ဟုခေါ်သည့်အခါသူ၏မျက်စိသည်၎င်း၏အသေးစားအရွယ်အစားနှင့်မသန်မစွမ်းရှိနေသော်လည်း illuminated ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ငါသိနားလည်ကြ၏။ အဘယ်မှာရှိပါကဤကဲ့သို့သောသည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း ဖြစ်ကောင်းသည်မိမိအဘ၏နှုတ်ကနေ။ အဆိုပါအဘိုးအာဏာအရှိဆုံး avid တစ်ခုချင်းစီကိုသားရန်၎င်း၏ဆက်ခံ၏သီအိုရီအထောက်အထားပေးပြီပေလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမူဝါဒကြောင်းသံသယနိုင်ဘူး။ ယင်း၏ဆည်းဆာ၌ဤဟောင်းခြင်္သေ့, ထောင်သို့မဟုတ်ပင်ရာဇပလ္လင်အဘို့မိမိတို့တရားဝင်ရုန်းကန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသတ်သူတို့ရဲ့ဒေါသမီး convoitantes ၌သူ၏အထီးတားဆီးခဲ့ရသည်။ သူမ၏အိမ်ခြံမြေထို့နောက်မိမိအလိုင်းထဲကရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရှငျဘုရငျသညျငါ့ကိုပြောတဲ့အခါဒါ "- တိုင်းပြည်အစိုးရသောမင်းဖြစ်သောသူတယောက်သည်, ဤသူပြီးသားရှငျဘုရငျသစျသောကွောငျ့ပြောနေတာကိုရှာဖွေမယ့်သောတဦးတည်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုဦးတည်းကိုသူ့အဘို့ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "မပြန်ပြောပြ ဂုဏ်န palaver ရှာဖွေပါ။ " မိမိသားအဘို့မိမိအကြီးမားမေတ္တာ၌သူလူတိုင်းမိမိပလ္လင် shimmered နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဘို့ကိုခေါ်။ အဘယ်သူသည်ဤအခြေအနေ၌ကွဲပြားခြားနားပွုပါပွီမလဲ ငါသည်ဤပြိုင်ပွဲအတွက်ယုံကြည်အခြားရွေးချယ်စရာမမြင်နိုင်ကြဘူး။ သို့သျောလညျးကိုယျတျောသညျမိမိတရားရုံးတွင်ငြိမ်းချမ်းရေး, နှင့်၎င်း၏ဆုံးဖြတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြီးအကာအကွယ်အရေးယူဘို့, ကဘုရင်, မှော်အတတ်အားဖွငျ့အသေသတ်ခြင်းကိုအဘယ်သူ၏အငတ်ပါဝါအဘို့အဆောင်ကြဉ်းစေခြင်းငှါမိမိသားသမီးများ၏တဦးတည်းထားကြောင်းဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ မိမိအဘ၏ရှေးခယျြမှုအမွေကိုစိန်ခေါ်ရန်။ ဤသည်ကိုသူတို့ဖွင့်ဘုရင်ရှေ့တော်၌အချို့သောတော်ဝင်တရားရုံးများတွင်အချို့သောယောက်ျားများ၏သေဆုံးမှုကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါပြောပါတယျ။ ထိုအခါငါကြောင်း fondjomekwet အတွက်အမှုဖြစ်ခဲ့သည်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်တခြားနေရာကိုတှေ့မွငျအချို့ကိစ္စ၌ဤဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါကသူတို့ကပိုအသေးစိတ်အတွက် chiefdoms ၏အချက်အလက်များဆနျးစစျလိမျ့မညျအဖြစ်ကစားမျက်နှာပြင်မှကန့်သတ်ခံရဖို့မငါ့ကိုဖတ်ပါသူသမိုင်းပညာရှင်တွန်းဖို့သက်သက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ပါတယ်။ '' အာဏာအားလုံးကိုပင်သူ့ကိုယ်ပိုင်များအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်စေ။ ဆိုလိုသည်မှာအာဏာကိုဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုမှာယခုငါငါ့ရှေ့မှာအစိတ်ပိုင်းထားပြီးမင်းကြီးသည်သန့်ရှင်းစေသောသူသည်တစ်မင်းသားရှိသည်။ ငါကြည့်အမျှသိချင်စိတ်ငါ့ကိုလုပ်ကြံလေ၏။ ငါသိမြင်င့်သောထိုညီအစ်ကို, ညီအစ်မဆန့်ကျင်, မိမိအဘ၏ဇီဝကမ္မစရိုက်များရှိသည်ဖို့မတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏ယုံကြည်မှုများအဘို့, ဒီရှုထောင့်စဉ်းစားမရခဲ့သည်။ ဒါဟာနီးပါးသေးရှင်ဘုရင်ကမဟုတ်ခဲ့ကတည်းကငါသူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးခွန်းများမေးနိုင်ဘူး။ ဘုရငျအဖွစျ becaufe မဟုတ်သူပွင့်လင်းမေးခွန်းများကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးကား, မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်သူ့ကိုကူညီသူကိုမိမိအတရားရုံး၏ဒြပ်စင်များ၏တဦးတည်း, ငါတို့ဘုရင်မှလေးစားမှုရှိကြတဲ့သဘောမျိုးပါလျှင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်တော်တစ်ဦးရရှိနိုငျ အဘိဥာဏ်ရိနာစွဲ။ ငါသူ့ကိုအ "ရွာများအတွက်ပိုပြီး" ဟုအထက်တန်းလွှာသူ၏စကားနှင့်အကြောင်းအရာများကို "ဟုအဆိုပါရွာများအတွက်အမြတ်အစွန်း" တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဒေသခံဓနရှင်လူတန်းစားသည်ယခုအခါ၎င်းတို့၏မိသားစုယူနစ်ထက် ကျော်လွန်. ရွာလူငယ်များအတွက် Springboard အဖြစ်အစေခံသင့်တယ် ။ ဒါ့အပြင်ထွက်ခွာပေါ်, ငါဆိုသည်အခါ, ငါစိတ်ရင်းမှန်ခဲ့: - သူ့တော်ကကျေးဇူး, ကျနော်တို့တရားရုံး၌နေသောကိုသိရန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအဆငျ့သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုအဘို့အဘယ်သို့ကြမ်းပြင်ခဲ့ကြသည်မှာ, အဲဒါကို louse ငါ့ထံသို့သိသာနှင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တော်ဝင်တရားရုံးတွင်တစ်ဦးကကောလာဟလရှငျဘုရငျကိုမိမိလက်ကိုအပေါ်တစ်ဦးသိုင်းကြိုးအမှတ်အသားနှင့်အတူမွေးဖွားလာသူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ သို့သော်ဤအမှု၌, သူတို့ကဒီအခြေအနေကိုပိုမိုခဲ့ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏အဖိုးအရူးလုပ်မရနိုင်ဘူး။ သူမ၏မွေးသေးသောကောင်လေးတစ်ယောက်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်ဆန်းထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အစပျိုးခံရဖို့လူသိများသည်သူ၏တရားရုံးမဆိုရည်မှန်းချက်ကြီးမိန်းမ, ။ နှင့်လုံလောက်သောစတင်မတဦးတည်းကအမြဲတမ်းပညာရှင်များစာလုံးပေါင်းနှုနျးနိုငျသညျ။ ဒီခြေဆွံ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုက၎င်း၏အပြင်မသန်မစွမ်းဘုရင်၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်, ကောင်းသောခဲ့ကြသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ဘဲလျက်အဘို့အကြှနျုပျ၏အဖိုးသိမှတ်ကြလော့။ ငါပြီးသားငါ475ièmeကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါငါမှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်သူ့အဘို့မတွက်ချက်မှုလုပ်ခဲ့တယ်, အခြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်သူသိသိသာသာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းကိုရှိသည်ဖို့သလိုပဲငါကတခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနှင့်အတူပခုံးပွတ်ကြဖို့မလိုခဲ့သည်။ ဒီအပျော့သွားတာကိုသူတို့အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ကြ becaufe ဘူး။ ငါရာထူး assign နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ငါ fondjomekwets ၏နောက်ရှင်ဘုရင်ကသူ့ကိုဖြစ်ချင်တယ်။ သူကနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နိုင်သောရွာမှာရောက်လာချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထိုင်လျက်နေကြခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိခဲ့လျှင်အဖြစ်အရုဏ်မှာလာမယ့်နေ့ကသူ၏ဇာတိ checkbox ကိုစွန့်ခွာရန်အလို့ငှာဖြစ်သည်။
အဲဒီတနင်္ဂနွေ, ငါသည်ကောင်းသောကုမ္ပဏီအတွက် 9h ဖို့ chiefdom Fondjomekwet ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခါသမယများအတွက်, ကိုယ့်တဦးတည်းလက်ထောက်ရဖို့ကောင်းသောထင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာငါ့အလေးစားမှုထိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြစ်ခဲ့လုံလုံလောက်လောက်ငါ့အခေါင်းဆောင်မှုကိုလက်ခံရန်ရှင်းလင်း။ သို့ဖြစ်. ချားလ်စ် Ruffin Toche, မှတ်သားလောက်တဲ့ Tchougou ဖြင့်လိုက်ပါသွားငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည်မိသားစု box ထဲမှာရောက်တုန်း, ငါ့နည်းနည်းအစ်မတွေကိုစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအလုပ်ရှုပ်ခဲ့ကြသည်, ငါသည်သူတို့၏ကြီးမားသောအစ်ကိုဖြစ်ငါ့ကိုရှာတွေ့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမြည်းစမ်း။ ဒါနဲ့ငါ့အဘို့အဲဒီမှာတော်ဝင်တရားရုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသက်သေခံခြင်းနှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်မှဆက်ကပ်အပ်နှံတပ်ခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့သည်။ တော်ဝင်တရားရုံးမှအဝင်ဝမှာကျနော်အသစ်တည်ဆောက်ထားပွင့်လင်းသစ်သားဖိုင်ဘာအတွက်တစ်ဒါဇင်ဆိုင်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ကသစ်ကိုရှငျဘုရငျ၏အချိန်းကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်းအဆိုပါရေစာအဘို့သိုထားနေရာများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာငါ3ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်းငါ့ထံသို့သလိုပဲငါကတိထားတော်သောအလွန်ကြီးစွာသောကမ္ဘာကြီးအတွက်, ငါ့မရှိခြင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်, ထိုဂုဏ်ပြုနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှထင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါစခန်းမှစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဘူး။ မှူးတော်မတ်ထံအပ်နှံနေတဲ့ဖိုရမ်, ရွာ၏ကျန်, ခေါင်းဆောင်များ, ရှငျဘုရငျတို့နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များများအတွက်ဖိုရမ်နှင့်သင်တန်း၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖိုရမ်တစ်ခုထံအပ်နှံနေတဲ့ဖိုရမ်, ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မဟာမိတ်များရှိခဲ့သည်။ ငါမှူးမတ်များ၏ပြခန်း၌ထိုင်တော်မူ၏။ ဘာမှထက်ငါ့ကိုပိုပြီးအရေးပါအဘယျသို့က chiefdom များ၏ထိန်းချုပ်မှုမှာနံနက်ဝင်ရောက်ခဲ့သူသစ်ကိုအာဏာရလူတန်းစားရဲ့နိုင်ငံရေးဒဿနိကဗေဒဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခြင်းမရှိဘဲ, ငါမင်းသမီးနှင့်မင်းသားတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ပလက်ဖောင်းရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အထိပလက်ဖောင်းမှဆက်ခံသူစပီမပြောတတ်ကြည့်ရှုကြ၏။ အဆိုပါမရှိသဖြင့်တွင်သူမသည်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှ darted ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ and Play သေံတွင်သူမကဘုရင်ကခန့်အပ်ရန်မအပေးအယူလကျခံဖို့ကဤညီအစ်ကို, ညီအစ်မတွေရဲ့ရရှိနိုင်မှုအတည်ပြု။ ငါပညာရှိသခဲ့တယ်ထင်ခဲ့တယ်။ သူမအမြိုးသမီးမြားဖယ်ထုတ်လိုက်သောသူခေါင်းဆောင်များရွေးချယ်ခြင်းတစ် method ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကဒီအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ယူပြီးအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီပါ့မလား သူမ၏အဘ၏သမီး, သူမသာရှေးရိုးစွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူမအာဏာရပါတီအတွင်း Fondjomekwet ရွာ၏ tilt အတည်ပြုအခွင့်အရေးအားသို့ပွေးလေ၏သည့်အခါလည်း, ငါသည်အံ့အားသင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမတရားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီမင်းသမီးလေး၏ငယ်ရွယ်စဉ် View ငါ pouvoirisme ကင်မရွန်းထဲမှာသက်တမ်းတိုးဖို့ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ထင်။ ကျနော်တို့ပြင်သစ်အလံရိုက်နှက်အဖြစ် Fondjomekwet မှာကျနော်တို့ CPDM Yaounde တဲရိုက်တယ်။ fondjomekwet ဖို့လှည့်ကွက်, တဦးတည်းတစ်ချိန်တည်းမှာရွာသားတွေစားသုံးမှုစင်တာများမှ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုဒေါသထွက်ဖို့လမ်းကင်းမဲ့နေချိန်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပိုပြီးမျက်နှာသာနှင့်အနေအထားမျှော်လင့်ထားရန် CPDM ၏မျက်နှာသာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုသူ့အပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်ငါတို့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာနေစဉ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးသံအမတ်ကြီးသို့မဟုတ်သမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသေချာစေရန်အခြေခံအခြေခံအဆောက်အအုံမရှိခြင်းများအတွက်ရန်ပုံငွေပြင်သစ်အရာရှိများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဝယ်ခြင်းငှါပယ်ရှားဧရာထံမှနေ Yaounde ၌တည်ရှိ၏ ။ ကောက်ကျစ်, မဒဿနိကဗေဒ။ သူတို့ကယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့။ သူတို့ကအတွေးအခေါ်မှ impervious ဖြစ်ကြသည်။ ဒဿနပညာရှင်ချက်ချင်းများ၏မြှူဤ vulgar ခေါ်ဆိုပါ။ ဒါကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမိန့်ခွန်းများ၏အဆင့်ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အမိအဆိုပါစီတန်း၏ခေါင်းပေါ်မှာ floundering ခဲ့သည်ဗုံ၏အသံ Tom-toms resounded ရာကနေအရပျသို့ confluent ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပြီးသားနန်းစံဇာတ်သိမ်းပိုင်။ ထိုအသေး, နာမကျန်းခြင်းဖြင့်စည်ပင်ခံရစဉ်သူမ hummed နဲ့ကျွန်မသူမ၏ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသတ္တိ၏မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်သလိုသူ့အစ်ကိုများနှင့် fondjomekwets ဘုရင်၏နန်းစံ figurante ။ အဲဒါကိုသာ tool ကိုသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲလေ၌ရှိတစ်ဦးဦးသေဆုံးရွက်ခဲ့သလိုပဲ, ဘုရင်အဘယ်သူမျှမထည့်သွင်းစဉ်းစားခငျြတဘယ်မှာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူ့ကိုကြိုက်တယ်နှင့်သူသည်ဤအခွအေနေစေငါ့ကိုပညာရှိသလိုပဲ။ သူမကားမောင်းခဲ့သည်လူထုပုံပြင်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယင်းစတင် protocol ကိုများအတွက်မှူးမတ်များနှင့်မင်းသမီးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်နှောင်းပိုင်းမှာဘုရငျ၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းမြင် coopt ဖို့လုံလောက်သောမြင်သာရှိပါတယ်။ ငါ Co-ဘေးဖယ်သုံးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါဟာ Co-ရွေးချယ်မိန်းကလေးသူငါ့အမိ၏။ ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ငါသည်သူ၏ကွယ်လွန်သူအစ်ကိုကဘုရငျ၏ဝိညာဉ်အတွက်သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းရာထူးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သေဆုံးပြီးကတည်းကသူမဟာထိုနေ့ရက်ရှေ့မှာငါ့ကိုမမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ငါနားလည်ပါတယ်။ သူမသည်သူ့အစ်ကိုဘုရင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသောဖြင့်ငါ့ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ငါသစ်ကိုဘုရင်ကပဲပထမဦးဆုံး Co-ရွေးချယ် Tchoumbou ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူပြီးသားရှိပါတယ် Lagkam, Djoumbissiéရောက်လာသည့်အခါ။ ဒါကြောင့် becaufe ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လျက်အနိစ္စမရောက်မှီဘုရင် kamga သမာဓိရိုးရာဓလေ့ကြောင့်လက်အောက်ခံမှသူ့မိတ်ဆွေ Tchoula ၏ရှင်ဘုရင်ကိုဖိတ်ကြားဖူးခဲ့သည်။ ထိုအခါဒီမိတျဆှေဘုရင်က Kamga ၏ငယ်နှစ်ညီအစ်မတွေရဲ့ရေးစပ်သေးငယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့, Bafoussam အတွက်ဘုရင်ခံ၏နနျးတျောတစ်ကှကျဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အမိန့်ဖြင့်ပါရှိသောဤသည်အထုပ်, Fondjomekwet ၏ chiefdom များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းများ၏အမည်များ။ ဦးခေါင်းBatié Banja နှင့် Fomopia မိတ္တူလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီး Banja မှာစတင် protocol ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်Djoumbissiéသူဖမ်းမိနှင့်သူ၏လက်ထောက်ဆိုင်းငံ့ Lagkam ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဒီအကာအကွယ်အတိုင်းအတာကြောင်းပြောနိုင်; တပ်မက်ကတည်းကတော်ဝင် function ကိုနှိုးဆော်ခြင်း။ '' နေသမျှကာလပတ်လုံးဆန်ခါတင် Lagkam တံခါးခုံကိုကူးမထားပါဘူးအဖြစ်ပြုလုပ်စိုးစံရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်စေ။ ကြောင်းပြီးသား Lagkam ရန်ဒိုင်းလွှားအဖြစ်အသုံးပြုအများပြည်သူစတုရန်းပူးတွဲရွေးချယ်နိုငျသောသားမျိုးစိတ်များ၏ကိစ္စတွင်။ အဆိုပါ Lagkam မကြာခဏ LAKAM အချို့သောစာရေးဆရာများစာလုံးပေါင်းလျက်ရှိ၏ ငါ "Lagkam" c ကိုရေးလိုက်သောအခါငါစကား၌စီရင်သကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာစကားလုံးစာသားကအဓိပ်ပာယျ, မူလ "အရပျကိုစုဆောင်း" ကိုဆိုလိုသည် "မြေယာစုဆောင်းသူ။ " ဒါဟာနှောင်းပိုင်း King ရဲ့အကြိုက်ဆုံး၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားအောက်မှာလဲကြကြောင်းတာဝန်များကိုများအတွက်စွမ်းရည်ကိုဆည်းပူးသောဤအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသပြည်နယ်၏ဦးခေါငျး fondjomekwets ၏သစ်ကိုရှငျဘုရငျ၏ကိုယ်စားလှယ်မှတင်ပြသည့်အခါကျွန်မပြီးသားငါသည်နံနက်အချိန်၌ထွက်သွားဘယ်မှာ Bafang အတွက်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့။ ဤသည်တင်ပြချက်ငါ့ကိုတူညီခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးနိုငျငံတျော၌သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကြောင့်သူကသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလက်ခံသူ, နိုင်ငံရေးဘက်လိုက်ခြင်း မရှိ. အများကိန်းရွာသားတွေဝန်ခံသည်ကတည်းကဘုရင်ကမျှတရားဝင်မှုရှိကြောင်းသိသာဖြစ်သင့်သည်။ အခြားမည်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာကြောင့်ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာငါ့မိတ်ဆွေမင်းသားBépandaဖြုန်းခဲ့သလဲ သူ-ရွေးချယ်ပူးတွဲကြားတွင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါစီတန်းအတွက်မမွငျခဲ့သညျ။ သင်ကမင့် - ငါ့အမှန်းဆခုနှစ်, ငါသညျသူ၏ကွယ်လွန်သူအဘ၏လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်ထူးဆန်းသောကြောင့်ဟုဆိုနိုငျရှိသည်မယ်လို့သောအခါထိုချကြကုန်အံ့မယ်လို့ယူဆ။ နှစ်ရက်အကြာတွင်သူနေဆဲဖုန်းပေါ်မှာငါ့ကိုချယူခဲ့ပါဘူး။ ငါသူ့ကိုမခေါ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ biyaisme ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှုံးနိမ့်သူကဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုသမ္မတ၏မျက်နှာသာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်သော့ခတ်ဖို့လိုအဖြစ်? တဦးတည်းရှုံးနိမ့်ကိုဆီးတားနိုင်မပါလျှင်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်ရပ်တည်ရန်တစ်ကငျြ့ဝတျနဲ့နိုင်ငံရေးကျက်သည်မဟုတ်လော ဝေဖန်သုံးသပ်အဆိုအရကင်မရွန်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲများ၏စီမံခန့်ခွဲမှု Alternative ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုခွင့်ပြုမထားဘူး။ ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကိုယျ့ကိုယျကိုဖျောထုတျဖို့မရှငျဘုရငျသပါစေ, fondjomekwet အဖြစ်လျှို့ဝှက်န်ဆောင်မှုမှကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ထုတ်မဆိုကြကုန်အံ့။ ထိုသို့သောအသက်ပေတည်း။ Fondjomekwet မှာမဲဆန္ဒရှင်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, တစ်ဦးသေဆုံးနေစိုးစံလေ၏။
ဤသည်တိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းငါ့ကိုဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင် Hamitic သို့မဟုတ် Kemites (Cham သို့မဟုတ်ကမ်းမှလာသည်ဟုစကားလုံး, အဲဂုတ္တုရှေးဟောင်းအမည်) နှင့်အခြားပန်အာဖရိကန်၏စွဲချက်ဖြေဆိုခွင့်ပြုရန်လုံလောက်သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရသည်။ ရဲ့သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပါစို့:
ရိုးရာ chiefdoms အတွက်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပြည်နယ်အဆင့်မှာ reproducible ဖြစ်ပါတယ် 1- ။
အဆိုပါ 2- ကိုလိုနီ democratizes မဟုတ်ပါ
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ 4-, ဒီမိုကရေစီလူမျိုးဆန့်ကျင်ကစားနေသည်။
စာရွက်စာတမ်းစုဆောင်းခြင်းသောကြောင့်ဇာတ်လမ်းယူခြင်း, ဒီအဆိုပြုချက်ဒီမိုကရက်တစ်အားထုတ်မှုဤမရရှိခြင်း၏အမေရိကန် Barry Goldwater အားဖြင့် 60 နှစ်ပေါင်းထံမှရှုံးအဆိုပါလမ်းနည်းပါးခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခုနှစ်တွင်အစပြုကြောင်းပြသ deconstruct လုပ်ရန်မှတင်ပြသည်။ ဒါဟာလှုပ်ရှားမှု ka (င) ပိုးရွအကြောင်း, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အာဖရိကခေတ်ဆန်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပထဲမှာအာဖရိကပြင်ပလူတစုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လူသိများသည်ဟုဆိုရပေမည်။ ပန်အာဖရိကန်အာဖရိကအတွင်းရှိနှစ်ပေါင်း 50 နိုင်ငံရေးညီညွတ်မှုတောင်းဆိုတစ်ခု endogenous လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအများကိန်းနေသောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့ပင်ချဉ်းကပ်၏မတူကွဲပြားမှုမွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဒီမိုကရက်ဆန့်ကျင်, တီဗီအစုံနှင့် leitmotif နှင့်အတူဤလှုပ်ရှားမှုအပေးအယူဟုဆိုကာငါ့ကိုပုံရသည်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Banda-Kani ဟုခေါ်သည်။
1 - ရိုးရာခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အုပ်ချုပ်မှုပုံစံလုံးဝမတစ်ဦး reproducible ပြည်နယ်အဆင့်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ပြည်နယ်ဖြည့်ဖို့စီမံခန့်ခွဲအဖြစ်အစဉ်အလာခေါင်းဆောင်မှုအဆိုးတစ်ဦးချင်းစီလာအောင်နှိုးဆွ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဘန်တူအကြီးအကဲနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကျနော်တို့သူသည်မိမိအသေခံခြင်းအားဖြင့်အာဏာကိုစွန့်ခွာမရနိုငျသော, ဒီမှာ Mobutu ခေါ်သောနိုင်ပါတယ်။ အာဏာရလာမယ့်, သူကမိမိတိုင်းပြည်အတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောဘိုးဘွားဘာသာရေးထုံးတမ်းမှဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်အခါ, ကျနော်တို့ Biya မှာဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဖတ်နိုင်သည်။ ဤသည်ယူဆရ "Boss ၏သူဌေးက" ၏မေးခွန်းထုတ်စရာစိတ်ကူးအားကောင်းရန်။ chiefdoms ခုနှစ်, တရားဝင်မှုစားဖိုမှူးပြီးသားလည်းခေါင်းဆောင်သူသည်မိမိအဘထံမှလာသည်။ ပြည်နယ်အဆင့်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏တရားဝင်မှုကိုသာပုံစံမျိုးရယူနှင့်နောက်ဆုံးမှာသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရုံးကျင်းပရန်စီနိုင်ငံသားများ၏စွမ်းရည်ကိုကနေလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲများနဲ့ Alternate ဆိုလိုသည်။ သူတို့အဖှဲ့အစညျးမြား၏ခေါင်းပေါ်မှာရောက်လာအဖြစ်သူတို့ရွာအကြီးအကဲများ၏အကြောင်းအရာများ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော, အာဖရိကငယ်သည်ဆိုသော်လည်း embody လိမ့်မယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး mode ကိုအမျှသူတို့တိုင်းပြည်၏ကျန်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအရသာဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုန်းကျင်ပစ္စည်းပစ္စယ, သူတို့ရဲ့လူမျိုးရေး, ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုဖွဲ့အစီအမံ။ ဤရွေ့ကား, tricks အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, မှားယွင်းမှု, ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်သတ်ဖြတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါသည်။ (1) သူတို့အသေ, ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုကွယ်လွန်သူ၏သားသို့မဟုတ်ပါဝါရှိသူ၏အနီးကပ်တွဲဖက်၏မြင့်တက်သာအခွင့်ထူးခံကြွလာသောကြောင့်။ အဆိုပါသားရွေးကောက်ပွဲများ၏မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်နေစဉ်ကနိုင်ငံရေးကစားပွဲ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးငြင်းဆန်သောသူသည်နိုင်ငံရေးအမြတ်အစွန်းနှင့်ဂိုဏ်းတစ်ဆောင်များတွင်၏စညျးလုံးနဖူးစည်းစာတန်းဖြစ်လာသည်။ သူတို့ရဲ့ prerogatives အားဖြင့် Deafened နှင့်မကျြစိကှ, သူတို့ကသူတို့တဘက်၌အဘယ်သူမျှမအနာဂတ်ခြိမ်းခြောက်မှုသူတို့ပြိုင်ဘက်နှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့်စစ်ကြောတော်မူကြောင်းအစားအစာကိုကြည့်ပါ။ လျစ်လျူရှုသူတို့လူငယ်အနာဂတ်မှာတုံ့ပြန်ရန်စိန်ခေါ်ကွိုတငျပွငျဆငျမနိုင်, သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ယခုအချိန်တွင်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကျနော်တို့ဟီလာရီကလင်တန်နှင့်အတူဘုရ်ှကမိသားစုနှင့်ယနေ့နှင့်အတူအမေရိကရှိလည်းမြင်ပြောကြပါတယ်။ မှားယွင်းနေ။ အမေရိကန်ပါတီများအတွက်မူလတန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပုံဖော်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၌သူ၏အောင်ပွဲ၏အရည်အသွေး, အနိုင်ရသည့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်လူမျိုး၏အကျိုးစီးပွားများအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်ပြီး, အားကောင်းအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပင်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပုံဖော်။
အာဖရိက၏အရှငျဘုရငျတို့ကကျွန်ကုန်သွယ်ရေးလာမယ့်မြင်ကြရှိခြင်းမအပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကိုလိုနီခေတ်လာမယ့်မြင်ကြရှိခြင်းမအပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ တဖန်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတအဘို့သိမ်းယူသောသူတို့ကိုသူတို့၏တိုင်းပြည်, တရုတ်, တောင်ကိုရီးယားနှင့်ပင်အိန္ဒိယထက်ဝီရိယတူညီတဲ့သှငျပွောငျးသှားလက်အောက်ခံနိုင်ဖြစ်ခြင်းမအဖြစ်အပြစ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ ထိုမင်းကြီးနှင့်အာဖရိကသမ္မတသူတို့သမိုင်း၏ deniers ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကကျရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ယခုပျက်ကွက်လျှင်, အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ကအရှုံးခဲ့ကြောင်းကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။ Aesop အချိန်ပညာရှိတဲ့အာဖရိကဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာအာဖရိကန်သည်မိမိထက်သာလွန်သည်ပညာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ဘူး, စာမဖတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံသောသူသည်ထိုအဥရောပ-type အမျိုးအစားကစားသမား, သူ့အချိန်မထီမဲ့မြင်ပြုတတ်အတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, La Fontaine နာကျင်စွာအမှုတော်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ငါတို့သည်အပေါငျးတို့သဒဏ္ဍရီက "Wolf ကနှင့်သိုးသငယ်ကိုဖတ်ပါ။ "ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဒဏ္ဍရီအဆိုပါတရားခံသူသိုးသငယ်သည်ကိုသိမှတ်သောသူသည်မည်မျှကိုရှိပါသလဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကို၏ကျန်အာဖရိက မှလွဲ. နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ နှင့်နားလည်ရန်ပြီးခဲ့သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကတရုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှကြောင့် Wolf ကသို့လှည့်။ ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ Aesop ၏ဒဏ္ဍရီနားလည်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မေးပါရမယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, ယခုအချိန်တွင်၏ဘယ်လိုကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်တကွ, အနာဂတ်ကာလ၏အဆက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အဖြေကိုလက်လွတ်လျှင်ဒီတော့ကျနော်တို့အနာဂတ်လွဲချော်ကြပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင်၏ဤကိစ္စကိုဒီမိုကရေစီဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီိံငြ်, ကခွင့်ပြု opinons နှင့်အခြားနည်းလမ်းများဗဟုအသုံးပြုပုံင့်လင်းမြင်သာများ၏သရုပ်ပြရန်နှင့်ထိုကြောင့်, လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစတေယျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ရိုးရာ chiefdoms အတွက်မျှခိုးယူသို့မဟုတ်လွှဲရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဤ chiefdoms အတွက်နေ့စဉ်သိရန်မှားယွင်းနေပါတယ်။ ဒီတော့ဘယ်မှာ Vampire နဲ့စုန်းအတတ်ဤပုံပြင်များ chiefdoms အတွင်းတဦးတည်းတရားသူကြီးကြောင်းပြုကြသနည်း အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေလှဲသုံးစား Vampire ၏စကေးအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်မှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါမျှောဆရာပုလှဲသုံးစားလူမြိုးတစျမြိုးတဦးသေဆုံး, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသေဆုံး။ သူတို့တစ်တွေ Pre-ကိုလိုနီအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများများသန့်စင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအတွက်သို့သော်ကျနော်တို့အစဉ်အလာခေါင်းဆောင်မှုသည်းခံရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သူတို့သည်ငါတို့လူမျိုးတို့၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသိသိသာသာ, စည်းရုံးစီးပွားရေးနှင့်ရိုးရာဖြစ်ရပ်များ။ သို့သော်ဤ chiefdoms အလှဆင်ထက်ပိုအဖွဲ့အစည်းများသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖွဲ့စည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
2 - ကိုလိုနီအတွက်ဒီမိုကရေစီနှင့် Post-ကိုလိုနီခေတ်ပြည်နယ်များ မှစ. ။
အာဖရိက၏ပြင်သစ်ကိုလိုနီအရည်အချင်းပြည့်မီရန်စိတ်ကူးပြင်သစ်တွင်မိမိတို့၏တာဝန်ယူဆနိုင်သောသူတို့အားခွဲထွက်ရေးသတ်ကူညီဤသည်ယခင်ကိုလိုနီများ၏ကျဆင်းမှုသယ်ဆောင်သောသဘောဝေဖန်သူများက၏စိတ်ထဲတွင်အတွက်တရားမျှတဖြစ်ပါသည် စည်းစိမ်ချမ်းသာများနှင့်တိုးချဲ့ဆီသို့မိမိတို့၏တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်။ ထိုသို့ပြင်သစ်အရာရှိများ၏ပညာအတတ်မရှိဘဲ operated သောပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်တစ်ခုတည်းဝန်ကြီးအဖွဲ့အပြောင်းအလဲယနေ့မရှိကြောင်းငါ့ထံသို့ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်မပိုနှစ်သက်ဟူသောဝေါဟာရကိုကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလလွတ်လပ်ရေး၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်တစ် recolonization ချင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဒီရမှတ် Lionel Sinsou ဘီနင်နှင့်အသစ်သောနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပဲရစ်အယူခံတရားမျှတပုံရသည်ကားအဘယ်သို့ ပြင်သစ်မှသူ၏ပထမဆုံးအလည်အပတ်၌ဤတိုင်းပြည်။ (2) (3) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ညာဘက်ပြီးသားအာဖရိကအထက်တန်းလွှာတို့တွင်အမှီခိုဘို့ဤတိုးမြှင့်လိုအပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် Donald Trump ၏စကားသံတို့ကအဘယ်သူသည်အာဖရိက၏ Re-ကိုလိုနီခေတ်တောင်းဆိုသူပွဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ကဆိုသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကိုရှင်းလင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အခြားဥရောပနှင့်အာရှအတွက်မဟုတ်တော့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်မှန်မှာ, ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောရီပတ်ဘလစ်ကန်များထဲတွင်သူကိုသူတို့ကဤအရင်းအမြစ်များကိုဝင်ရောက်ဖို့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးအနေအထားကိုသုံးနိုင်သည်ဒီတော့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့်စျေးကြီးအာဖရိကသတ္တုဓာတ်မဝယ်ကြောင်းယခုကူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီပြန့်ပွားကျနော်တို့နိုင်ငံမှာငြင်းငါ့ကိုပုံရသည်။ ဒါဟာသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်သတင်းစာများနှင့်သည် Periodic ရွေးကောက်ပွဲများ၏ပြန့်ပွားကိုးကား။ ထိုအမဟုတ်ဘဲအဖွဲ့အစည်းများ၏ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, အုပ်ချုပ်ရေးရုံမရှိခြင်းတစ်အိုးရဲ့လမ်းလျှောက်အဖြစ်နှင့်စီးပွားရေးသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု palliative အဖြစ်။ ငါတို့လူမျိုးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်, လူမှုရေးစွမ်းဆောင်မှုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ၏အသံစည်းမျဉ်းကိုရှာဖွေနေသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြတ်များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏တိမ်းညွတ်, ထိရောက်မှုကူညီမည်မဟုတ် တန်ခိုးမှတတ်နိုင်သမျှခံစားရန်လူမှုရေးသရုပ်ဆောင်တွေ, ဒါပေမယ့်။ ဤသည်လိုလားတန်ခိုး၌ကြာရှည်မနေပါနဲ့ "Biya ပြောပါတယ်ရှင်းပြသည်အရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျနိုင်ကြသည်ဆိုပါက '' အာဏာကိုလာငါ့ကိုယူဟု၏ "တစ်လမ်း။ "ကျနော်တို့ကအုပ်ချုပ်သောသူတို့မူကားဘာသာရပ်များထဲကနေသောတစ်ပြိုင်ပွဲ သို့ဖြစ်. ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီ၏အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီနည်းကျအာဏာမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လိုပြည်နယ်အာဏာမှဒီမိုကရေစီဝိညာဏ် Aspire တည်ဆောက်ရန်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအင်အားသုံးနှင့်မဒီမိုကရေစီရှုတ်ချ၏အသိဉာဏ်မေးမြန်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
3 - ဒီမိုကရေစီိံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစစ်အမှန်ပြဿနာများထားခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြဿနာတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်တာဝန်ဒီမိုကရေစီဘဝကိုလာအောင်နှိုးဆွသောသရုပ်ဆောင်များကိုမှကျရောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ဤကိစ္စ။ သိသိသာသာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်လူအများ၏လိုအပ်ချက်များတို့အကြားဖို့ဒီလိုအပ်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးသမားအောက်မှာလာပါတယ်။ pouvoirisme, ခရိုနီဝါဒ, အမြတ်အစွန်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအင်အားကြီးနှင့်အတူအစွဲအလမ်းသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်လာလျှင်ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်မှလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ အုပ်ချုပ်မှုဤမျိုးစုံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မတရားမှု, ပါဝါအဘို့အခြားကစားသမားများ၏ Self-ကာကွယ်ရေးအားထုတ်မှုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အာဏာကိုတစ်ဦးသဘောအရ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းသေစေတတ်သောအငြင်းပွားမှု၏ပုံစံကိုယူနိုငျသညျ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပါဝါကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis သူတို့ကိုလွတ်ကြောင်းဓာတ်ဆီသူတို့အနေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြောင်း, ငါ့နိဒါန်းဇာတ်ကြောင်းထဲမှာမြင်ကြပြီ။ အစိုးရထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပုံမှန် Alternative တည်ငြိမ်မှုနှင့်လူမှုရေးထိရောက်မှုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ထို့ကြောင့်အရေးပေါ်နှင့်လုံးဝလိုအပ်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဘို့ဤအလိုဆန္ဒသဘာဝအစစ်အမှန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အတဆယ်တနှစ်လုံးဝသူ့ဟာသူသက်တမ်းတိုးမည်။ ဒါဟာအာဖရိကသမ္မတအတွက်ဘရက်ခ်အိုဘားမား၏သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်ပါဝါမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့စိတ်အားထက်သန်သည်။ ပါဝါအတွက်သူတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ကနေဒီမပါဘဲ Deng ရှောင်ပင်, Sankara မပါဘဲ Burkina Faso, နှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ကြောင်းပါလိမ့်မယ်တရုတ်ဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
သူကတရုတ် "ကမ္ဘာ့အလုပ်ရုံစေရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမိတ်ဆက်အဖြစ် Deng ရှောင်ပင်ကွန်မြူနစ်ပါတီအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးကလူနည်းစုဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘဲ, တရုတ်နေဆဲနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ပေါ်မှာမဖြစ်စလောက်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Burkina Faso အတွက် Sankara များ၏စိုက်ပျိုးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုငါသိ၏။ ယနေ့ Burkinabe လူတွေအာဏာရှင်တွေကသူ့ဦးခေါင်းကိုကိုင်နိုင်လျှင်ကြောင့်အတိအကျယင်း၏သောထာဝရကပ္ပတိန်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ် becaufe, မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကွာသူ့ထံမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းနှင့်နည်းပညာ, United States ကိုသေးပြင်ဆင်ထားမဟုတ်ကြသည့်အခါကနေဒီအမေရိကန် lunar အစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒီပရိုဂရမ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများ 40 နှစ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုလွှမ်းမိုးဖို့အာကာသသုတေသနအားထုတ်မှုမှအကြိုးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါရီပတ်ဘလီကန်ရေဂင်အလှည့်အတွက်သူ့ကိုတစ်ခုတည်းပါတီကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုအကျဉ်းသွေးဆောင်ရသောဆိုဗီယက်၏ပြိုကျအနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်လည်းအားလုံးသှေးထှကျသံယို (နေဖြင့်စတင်အုတ်မြစ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောဆီလီကွန်ဗယ်လီမှသိသိသာသာတိုးတက်မှုပေး၏မသာ ထို့နောက်ဒုတိယသမ္မတကလင်တန်အောက်မှာ) အစီအစဉ် sextant ကြောင့်ယနေ့တည်ရှိအဖြစ်အင်တာနက်ရဲ့ထပ်ကိန်းနှစ်ခုစလုံးခဲ့သည့် "ဟုအဆိုပါသတင်းအချက်အလက် superhighway" ။ ဘားရက်အိုဘားမားသမ္မတရာထူးရ7နှစ်ပေါင်း Ahidjo-Biya 56 နှစ်ပေါင်းစက်မှုသုတေသနအစီအစဉ်များကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နီးပါးလူ့ဦးနှောက်နှင့်အတူအနက်ရောင်, လူ့ဦးနှောက်ကိုအလိုတော်တနေ့စက်ရုပ်၏နောက်ဆုံးအစီအစဉ်သည်။ ဤရွေ့ကားစက်ရုပ်ရန်လိုသောဂြိုလ်များနှင့်ယခုလူကိုလိမ့်မည်ပထမဦးဆုံး interplanetary ဖလှယ်မှုအပေါ်စက်ရုံများဖွင့်လာကြ၏။ အဆိုပါ alternate အားသာချက်ရှိပါတယ်; တစ်ဦးပျင်းရိဆက်ခံပြည့်ဝဖို့ထပ်ဆင့်လွှင်လိမ့်မည်။ အခါနေ့ကိုသာ, ညဉ့်တစ်ဦးတက်ကြွသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားအောင်မြင်နိုင်ပြီးလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအဲဒီမှာအောင်မြင်ဖို့နှင့်အသင်္ချေနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်၏ကံကြမ္မာများပြားဖို့ရည်ရွယ်ထားလိမ့်မည်ဟုအစပျိုးဆောင်ရွက်ရန် Lucid ။ ဒါဟာပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းများအတွက်သက်တမ်းကန့်သတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမွေးဖွားခဲ့သည်သောဤအတွေးအခေါ်သည်။ အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ခွန်အားကြောင်းစိတ်ကူးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အမေရိကန် 30 သန်းသည်ဆင်းရဲမှထွက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကမူရင်းကိုသူတို့တိုင်းပြည်ပြန်သွားဖို့ထက်အမေရိကန်, 80 သန်းတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်အသက်ရှင်ဖို့ပိုကောင်းဖြစ်ကြကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွဲတေမှုတခါတရံ 20 လူဦးရေရဲ့% နှင့်ရောက်ရှိကြောင်းမေ့ feint ။ ကျနော်တို့ကိုအခြားတိုင်းပြည်ထက်ပိုပြီး, Uniens စိန်ခေါ်မှုမှပြည်နယ်များများ၏စွမ်းရည်ကိုအဆမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟေလာရီကလင်တန်တို့ကယခုအဆိုပြုချက် Bernie Sanders ကြိမ်နှင့်အတူကြည့်ရှုပါ။
4 - အနောက်ခုနှစ်တွင်, လူများဒီမိုကရေစီပါတီများ၏အရာဝတ္ထုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်
ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အတှကျအဥရောပအာဏာကြာပါသည်။ တိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုကောင်းသည်၎င်း၏ယခင်ထက်မိမိလူတို့ကိုအဘို့ပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီကနေတဆင့်သုံးစွဲဖို့လိုသည်။ ထိုအခါအောင်မြင်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနောက်ပိုင်းတွင်ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်အသံဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောတူညီခဲ့ကြသည်နောက်တဖန်ပုနျကမှလျှင်ပင်။ ထို့ကြောင့်မာဂရက်သက်ချာဟာဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများ၏ထငျအတွက်ပေးထက်ရွေးကောက်ပွဲဆုံးရှုံးဖို့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒါဟာလူထုကြိုက်နိုင်ငံရေးသမားခွဲခြားအရာဖြစ်တယ်။ တပြည်နယ်ကသာအစစ်အမှန်အကျိုးစီးပွားထင်၏။ အခြားလူများအတွက်ယူပြီးမိမိကိုမိမိကသာချက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထင်၏။ နှစ်ခုအစွန်းအကြားတစ်ဖွဲ့လုံးအနက်ဆုံးသောတွင်းလည်းမရှိ။ တဦးတည်းလူတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုယုံကြည်သောနှင့်ဤအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောလိုင်းများကိုသက်ဝင်။ အခြားလူရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုယုံကြည်သောနှင့်ဤပန်းတိုင်အမျိုးသားရေးအားထုတ်မှု diverts ။ ဒါကလက်ရှိဒေဝါလီခံဂရိနိုင်ငံ, စပိန်နှင့်ဗင်နီဇွဲလား၏အခက်အခဲများမတူဘဲအတွက်အောင်မြင်မှုယူနိုက်တက် Uniens, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အမြားဒီမိုကရေစီ၏အာဖရိကန် Thoth- ဘုရားသခငျသညျ Hermes ထောက်ခံသူတွေကိုသူကပြောပါတယ်သည့်အခါ: "အရာအားလုံးထာဝစဉ်တယောက်ကိုတယောက်ပုံစံကနေသွားတော်နှင့်ခြွင်းချက်တခုကိုသင်မရှိကြပေ။ "ဒါဟာပြည်နယ်အဆင့်, လူ့ပြောင်းလဲမှုနှင့်လည်းမကြာခဏတနည်းဆိုလိုတာကမူဝါဒပြောင်းလဲမှုမှာဆိုလိုသညျ။ ဘုရားသခင့ Thoth ၏မိန့်၏ပြည့်စုံချက် "ဘေးဥပဒ်ကိုအမှန်တရားများအတွက်ပြောပြီသောအခါငြိမ်ဝပ်စွာနေမတည်မနေပါနဲ့နေရောင်ကဲ့သို့အပေါင်းတို့ထက်ထွန်းလင်း," တစ်ဦးချင်း, အများပြည်သူနှင့်ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်အာမခံချက်ရှိမယ့်အာကာသ presupposes ။ 1964 ခုနှစ်တွင် Lyndon Johnson ကဆန့်ကျင်နေတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းစစ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများမာဖီးယား၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစေ့စပ်, Barry Goldwater အဆိုပါဖက်ဒရယ်ပါဝါပျက်ကွက်ခွင့်ပြုရန်လုံလောက်သောဖြစ်ရမည် "အဲဒီ Pennsylvania ပြည်နယ်ရှိသူ၏ပရိသတ်ကိုပြောသည် တစ်ဦးချင်းစီလွတ်လပ်မှု, အခမဲ့လုပ်ငန်း, ထိုဂိမ်းများကိုစျေးကွက်တပ်ဖွဲ့များသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုယုတ္တိဗေဒနှင့်ကိုသက်ဝင်နှင့်မြှင့်တင်ရန်လုံလုံလောက်လောက်ပစ္စုပ္ပန်အခမဲ့အပ်နှံ။ " Barry Golwater ကြောင့်ရိုးရိုးမိမိလူမြိုးကိုအာဖရိကန် Thoth အဘို့ဘုရားသခင်၏စကားပြန်ကဆိုသည်အခါ။ တရုတ်နှင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု: အဲဒီအချိန်တုန်းကအခမဲ့ mode ကိုတစ်ဦး Keynesian ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနှင့်အာဏာရှင်မာက်စ်ဝါဒီကွန်မြူနစ်သိမ်းပိုက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမရေိထို့နောက် Ultra-Liberation နှင့်အတူ "Down အော်လေ! "ထိုအခါ Goldwater ရွေးကောက်ပွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူ၏အမွေခံနှစ်ခုနှစ်ခုမီးတောင်ထိုးဖောက်လောင်း, ရေဂင်နှင့် Tacher အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာထလေ၏။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့သိသောရလဒ်များကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ပင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပေါ်ပေါက်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲစီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှည်လျားသည်။
ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုးကားမဟုတ်ဘဲနယ်ချဲ့ဝါဒ၏ရှိသည်သောအဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးများ, တန်ဖိုးများ 5- ။
(လူသားများအတွက်) "ပွင့်လင်းအလင်း၏နိုငျငံတျော! "နတ်ဘုရား Thoth ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့လူသားထုလိုအပ်ချက်များ၏ဖိနှိပ်မှုအောက်တွင်ခဲ့ကြောင်းတခြားနေရာပြောပါတယ်။ (4) တစ်ဦးအကြီးစားဘို့လိုအပ်ကြောင်းများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအလုပ်နှင့်စည်းကမ်းများ၏ခွဲဝေအောက်ပါအတိုင်း။ အဆိုပါစည်းကမ်းလှုပျရှားနှင့်ညွှန်ကြားထားတဲ့အခွင့်အာဏာလိုအပ်သည်။ ကမေးခွန်းထုတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သောအခြားအမှုအရာတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒီအခွင့်အာဏာ၏ထိရောက်မှုကိုသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အာဏာကြောင့်အချိန်နှင့်ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူဝင်ရောက်အလှည့်စီသရုပ်ဆောင်များအတွက်တရားဝင်ဖြစ်နိုင်ခြေမှာပြောဆိုပါ။ ဒါကဒီမိုကရေစီပါပဲ။ ဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မပြည်နယ်များအနိုင်အထက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်, La Baule အတွက် Mitterand ၏မိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီဘဝကိုလာအောင်နှိုးဆွကြောင်းမေတ္တာနှင့်အလှအပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ပလေတို၏ရီပတ်ဘလီကန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အငြင်းအခုံများက Short, Kani Banda-ဆိုကရေးတီးသတ်သောဒီမိုကရက်ရှိသည်စွပ်စွဲတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းကအခြားဒီမိုကရေစီနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မဒီမိုကရေစီနည်းကျလူ့အဖွဲ့အစည်း, သူ့ပညာရှင်တွေကိုသတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကလက်ရှိတာဝန်ခံအပါအဝင်မပေးပါ။
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဒီမိုကရေစီများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောကောင်းလှ၏။ ငါ Peace Corps ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထင်, တိုးခြင်းနှင့်လည်း USAID ကများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရန်ဆန္ဒအလျောက်လုပ်ရပ်တွေကို။ အမေရိကန်နီးပါးအမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြကြောင်းအခမဲ့ DVD ကိုစာအုပ်တွေပူဇော် 1000 ။ ပျမ်းမျှအမေရိကန်များအတွက်စျေးအကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်တွေကမ္ဘာ့မှအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များတွင်ဒီမိုကရေစီ၏ဧရိယာတိုးချဲ့ဖို့ကူညီသံသယဖြစ်ဖွယ်အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများ, စီအိုင်အေ၏ခွဲများ။ အဘယ်သူမျှမကိုငါမအထောက်အထားရှိသည်။ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတွေးအခေါ်များလှုံ့ဆော်မှု၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ဘဝ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်များကသူတို့နှင့်ညီမျှမပေးဘူးဆိုရင်သာအပြုသဘောဆောင်တဲ့သူတို့က, တခြားနေရာဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိရပါမည်။ ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်ရကြမည်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာဒီမိုကရေစီဘဝကိုအုပ်ချုပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများအမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများထက်ပိုမိုလှပသောဖြစ်ကြောင်းချင်ရပါမည်။ ရုပ်မြင်သံကြား, အင်တာနက်, ကွန်ပျူတာ, ပရင်တာများ, စက်ရုပ်, ဂြိုဟ်တုကိုတီထွင်ခဲ့သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့တစ်ဦးကဒီမိုကရေစီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ... အကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ပြီးမပါဘဲပွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဘရက်ခ်အိုဘားမားကနေသွေးခုန်နှုန်းထဲမှာဆီလီကွန်ဗယ်လီမှာ, လူသားအားလုံးများအတွက် universal ဝင်ငွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်စေခြင်းနှင့်သတ်ပစ်ရန်အရှေ့အာဖရိကအတွက် 6000 လူတွေအပေါ်လေ့လာမှုများပို့ချနေသည်နှင့်ကမ္ဘာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု။ Banda-kani သူအနောက်နိုင်ငံများတွင်အဘယ်သူမျှမအခမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကပြောပါတယ်။ သူဟာအာဖရိကန်ပရိသတ်ကိုပြင် inaudible သိလို့သူကမုသားကိုသုံးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သူကသူမ၏အာဖရိကလူငယ်များအကြားတစ် cheater အသိအမြင်ဖောက်လုပ်ဖို့ကူညီပေးဖို့လိုသည်။ သူကအာဖရိကမှာ 100 / 100 ရွေးကောက်ပွဲများမူမမှန်လျှင်, ဥရောပမှာရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်း 1 1000 နီးစပ်သူဆိုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူကဒီတဆယ် US မှာတဦးတည်းကမ္ဘာပေါ်မှာscénariserမှစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အနာဂတ်သို့ပရောဂျက်ကိုဘယ်လိုသိတယ်တဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျဖွစျနိုငျ သာ. ဆင်းရဲ link ကိုသီအိုရီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစွန့်ခွာလျှင်အပြင်ကျနော်တို့တိုကျို၏မြို့အတွက်, ကျွန်တော်တစ်ဦးနှစျ,6လအတွင်းအားလုံးအာဖရိကနိုင်ငံများအတွက်အမျိုးမျိုးကိုပိုစာအုပ်တွေဝယ်ကြည့်ပါ။ panafricanists ဘုရားသခင်နှင့်သမ်မာကမျြးဒါမှမဟုတ်ကိုရမ်ကျမ်း, အာဖရိကဖတ်တစ်ခုတည်းသောစာအုပ်၌ပါရှိသောသည်သူ၏ (မကောင်းတဲ့) စကားလုံးမြွက်နှင့်ကျလာသောရန်အဘို့အဒါဟာမလုံလောက်သေးပါ။ ဒါဟာ Gbagbo နှင့်ဝန်ကြီးများသူ၏နောက်လိုက်နောက်ပါများ၏အမှားဖြစ်ခဲ့သည်။ အာဖရိက၏နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတုံ့အဓိကအားဉာဏဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွင်မပါအံ့ဖွယ်ရှိပါသည်။ မဟာဗျူဟာပဏာမရေဂင်တွင်, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြည်ထောင်စုသားအပေါငျးတွေးခေါ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစတာလင် becaufe ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အာဖရိက becaufe အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ပျက်ကွက်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၏ဘုရားလူအများ၏သုံးအကြီးအကဲများ, ပူးပေါင်းကြံစည်မှု, kleptomania နှင့်ငြင်းပယ်ရှိပါတယ်။ buffoonery: ဤသူအပေါင်းတို့သည်တပါးသောဘုရားတို့ကို ပို. ပင်အစွမ်းထက်တဦးတည်းနတ်ဘုရားလက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုစီစဉ်ပေးသည့်အခါရှည်လျားသောလွန်ခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေး-အုပ်ချုပ်ရေးမာဖီးယားဂိုဏ်းကိုအလွယ်တကူအာဏာသိမ်းမှု, ပုန်ကန်နှင့်ပင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံများတွင်ရယူကြပြီရှင်းလင်းထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်အဖြစ်၌အကြှနျုပျတို့၏ compatriots ရောင်းချခဲ့သည့်အခါလက်ထက် မှစ. ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီလော ကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးနေပြောင်းလဲပြီအထောက်အထား။ ဒီမိုကရေစီပိတ်ပြီးအတွက်ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလပြည်နယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်၎င်း၏ပညာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအခန်းကဏ္ဍလွဲချော်။
cheat, လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအားဖြင့်အာဏာရလာမယ့်တစ်ဦးဒီမိုကရက်ပါတီထိတ်လန့်။ တစ်ဦးကဒီမိုကရက်ပါတီ cheat, လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအားဖြင့်အာဏာကိုနေမုန်း၏။ တစ်ဦးကဒီမိုကရက်ပါတီတန်ခိုး၌ 10 နှစ်ပေါင်း ကျော်လွန်. ဆက်လက်တည်ရှိကိုမုန်း၏။ ကသာအချို့သောနိုင်ငံများရှိအာဖရိကန်သည်ဤအတွေးအခေါ်များကိုဝေမျှမပေးသင့်ကြောင်း, တွေ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ "သင်သင်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကန့်နေသောကြောင့်စုံလင်မှ Aspire, ဘုရားသခင့ Thoth ပြောပါတယ်။ သင်တို့သည်အလျှင်းမစုံလင်သည်နှင့်သေးသင်သည်သင်၏ဆန္ဒနှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသင့်ပါတယ်။ "ရှေးခေတ်အာဖရိကန်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခေတ်တည်းထံမှချက်များမရရှိအလင်းနှစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့အမေရိကားအကြမ်းဖက်ကြောင်းပြောသည်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကွင်းထဲတွင်ကျွန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အာရပ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားလျှင်, Post-ကိုလိုနီခေတ်အာဖရိကအူထက်ပိုအာဖရိကဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးယခုသတ်ဖြတ်မှုဆက်လက်သည်ဟုဆိုဖို့မေ့လျော့။ အဘယ်သူ၏စာနယ်ဇင်းတောင်းဆိုမှုများသူတို့လူမျိုး၏အသှေးကိုသောက်နဲ့သူတို့ရဲ့အသားကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတ, ultra-အစွမ်းထက်အမေရိကတိုက်၏ခေါင်းပေါ်မှာလျှင်, လောကီပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ Banda-Kani Anti-နယ်ချဲ့လူဦးရေကစားနေစဉ်, နီးပါး 300 ရုရှားနှင့်တရုတ်သူလျှိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကစီးပွားရေး၏အကျိုးအတွက်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အမေရိကန်သုတေသနစင်တာများအတွက်နေ့စဉ်နည်းပညာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပျံသန်း။ 3000 တရုတ်တရုတ်အစိုးရ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ USA တွင်လေ့လာနေ။ ရုရှားနှင့်တရုတ်ရှိရာ၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုသိရန်နှင့်ငါတို့သည်သူတို့ကိုတုပရန်ငြင်းဆန်။ Senghor စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် irraisonnant negro ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ပဲတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာ၏တိုးတက်မှုနှင့်သက်သာချောင်ချိရေးမှဤမျှလောက်အထောက်အကူပြုသောဤဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများအတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ antipathy ၏အစေ့ကိုကြဲခြင်းကြောင့်လူငယ်တစ်ဦးအကူအညီနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ရေးအရဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသူတို့လွှတ်ထားသောနောက်ဆုံးကမ္ဘာကြီးကိုစစ်ကတည်းက။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝမ်းကွဲ၏အကူအညီ, အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ရောက်ကြ၏။ သူတို့ကဂျပန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားကောင်များဖြစ်ရပြီဂျပန်၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကတရုတ်နှင့်မြောက်ကိုရီးယား၏တိုက်ခိုက်နေသောအန္တရာယ်တားဆီးရန်ရန်တောင်ကိုရီးယား၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကစက်တင်ဘာလ 11 2001 များ၏တိုက်ခိုက်မှု၌သူ၏အတွေ့အကြုံကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ဘို့ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကိုအပြစ်ပေး။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးတမင်တကာအနိမ့်တိုက်ကြီးစွန့်ခွာဖို့မအာဖရိကတိုက်၌ရှိကြ၏။ ကဒါဖီဆုတ်ယုတ်မှုကသူ့ laudable စီးပွားရေးလှုံ့ဆော်မှုလာကြ၏။ ယင်း၏အဆိုပြုအာဖရိကငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်အတူ, သူသည်ပြင်သစ်ဘဏ္ဍာတိုက်၏ပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိကငွေကြေးအခွင့်အာဏာအားလုံးကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ သူကဂိုဏ်းသူ၏ယုတ္တိဗေဒအတွက်ဆာကိုဇီနေတိုးသို့ပြင်သစ်၏ပြန်လာဘို့လစ်ဗျား, United States မှာဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်သွားခဲ့တာကိုနားလည်သင့်တယ်။ သူကဂျာမန်စစ်တပ်နည်းပညာတိုက်ရိုက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအတွင်းဘယျသူမှမအောငျရုရှားနိုင်ငံလုပ်နိုင်သည်ဟုဝါရှင်တန်ကပြောသည်။ ဒါကြောင့်ပါရှိသောမဟုတ်ပါလျှင်သို့မဟုတ်, ပြင်သစ်ကြောင့်ဂျာမနီမှ၎င်း၏နီးကပ်မှအန္တရာယ်ရှိသည်။ ၏အချက်အလက်များဖြစ်ကြသည်ရှိရာဤသည်လည်းဖြစ်ပါတယ် "အမေရိကန်ပြဇာတ်။ " လစ်ဗျားရှိအမေရိကန်ထို့ကြောင့်မိမိအဒဏ်ဍာရီထဲမှာဆာကိုဇီကိုထောကျပံ့ဖို့ပေမယ့်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၏ကြည့်ရန်, ထိုအမှားကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အာမခံချက်ပူဇော်မတရုတ်နှင့်ရုရှားနှင့်အတူတည်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများယုံကြည်ဖြစ်ခြင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါချားလ်စ်တေလာဘုရ်ှကသူ့ကိုတောငျးဆိုသည့်အခါအာဏာကိုစွန့်ခွာဖို့တှနျ့ဆုတျခဲ့ပါဘူး။ သမ္မတအိုဘားမားသူ့ကိုယ်သူမေးရန်လာသောအခါကဒါဖီအတူတူပြုကြပြီသငျ့သညျ။
မီဒီယာများတွင် Tayou Kamgain အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ, သိပ္ပံနည်းကျအယူအဆတစ်ဦးချင်းစီ၏ဌာနခွဲအောက်မှကျရောက်ကြောင်းပြောပုံရသည်။ အာဖရိကရှိနေစဉ်, သိပ္ပံအုပ်စုများ၏ရှုပ်ထွေးအတွင်းကျရောက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီရေတွက်မထားဘူး။ Tayou မှန်နိုင်ပါတယ်, ငါမစဉ်းစားကြဘူး။ မိမိအထုတ်ပြန်ချက်များ၏မျက်နှာသာအတွက် militates ရာမျှလူမှုရေးတကယ်တော့ရှိပါတယ်။ ဂျူလီယန် Tadda နဲ့ထုတ်လွှင့်သတင်းစာဆရာကာလအတွင်းအပြင်အာဖရိကသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုရန်, Tayou အဆိုပါ Cheik Anta Diop Institute ကဆုံးမသွန်သင်အာဖရိကဖက်ရှင်တစ်ဦးပွဲတော်မှာအောင်မြင်မှုပြောပြခြင်းဖြင့်အဖြေတွေဟာကိုယ့်။ ကြှနျတေျာ့အနေအထား၌ငါသည်သတင်းစာဆရာဒီလိုမျိုး၏ကိစ္စရပ်များအတွက်နောက်ထပ်မသွားဖို့ရှက်ဟာယဉ်ကျေးခဲ့နားထောင်တတ်သူနေထိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့လယ်ထွန်ကာလ၌မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များတောမှလယ်ပြင်ကနေရွှေ့အံ့သောငှါစည်းဝေးသောသူအမြိုးသမီးမြား၏ဤအုပ်စုများကိုစဉ်းစားနေစဉ်, အမျိုးအနွယ်နှင့်စပါးရိတ်ရာကာလကာလ၌, စပါးရိတ်ရာကာလ၏အသီးကိုအမြဲပြန်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှရှိလာခြင်းဖြစ်သည် လယ်ပြင်။ ငါ Tayou သူ၏မှတ်ဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေခံစားခဲ့ရကျွန်ပြုမှုနှင့်ကိုလိုနီခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာမှတဆင့်ပေါင်းလိုက်သောဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကစာရေးဆရာများဤအမျိုးအစား၌သစ္စာရှိသောစာဖတ်သူသည်ထင်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်အတွက်ချောင်းမြောင်းပြိုးထောငျကိုကူညီအောင်, အမှုအရာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Tayou ဆန့်ကျင်ဖို့လိုလားကြောင်းရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းအဘယျသို့အဓိပ်ပာယျပေးနိုင်သလော အဆိုပါ Osiris ဒဏ္ဍာရီတွင်လှပစွာတုံ့ပြန်။
"Geb, မြေဘုရားနှင့် Nut, ကောင်းကင်နတ်ဘုရားနှစ်ခု Osiris နှင့်ရှေ၏သား, သမီးနှစ်ယောက်, Isis နှင့် Nephthys ရှိခဲ့ပါတယ်။ Osiris Isis နှင့်ရှေနေတဲ့ဇနီး Nephthys ယူလက်ထပ်ခဲ့သည်။ Osiris အဲဂုတ္တုပြည်ကိုစိုးစံလေ၏။ ရှေသကိုမနာလို, ရှေသတ်ပစ်ချင်ခဲ့တယ် Osiris ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ရင်ဘတ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးသောက်ပွဲခံစဉ်ကဆောင်သွား၏။ သူကလဲလျောင်းပြီးပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးမည့်သူအားပေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Osiris တိုးချဲ့သည့်အခါရှေလျင်မြန်စွာအဖုံးသူ့ကိုရိုက်နှင့်ပင်လယ်သို့သူ့ကိုပစ်ချဆွဲထုတ်။ အကူအညီလိုအပ်နေသူ, Isis ဖိနိတျပွညျရှာ၏။ သူမသည်ခေါင်းတလားကိုတွေ့အဲဂုတ္တုပြည်မှပြန်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဒါပေမယ့်ရှေခန္ဓာကိုယ်သိမ်းယူသူအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြောင်းတိုင်အောင်တဆယ်လေးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ Isis, သူမ၏ခင်ပွန်း၏အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားလျက်အဖွဲ့ဝင်များကိုစုဝေးစေဘုရား Anubis ၏အကူအညီနှင့်အတူပတ်ရစ် strips တွေခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနှင့်သူမ၏ဘဝကိုစေရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ထိုနေ့ရက်ကတည်းက Osiris သေလွန်သောသူတို့သည်၏နိုငျငံတျောစိုးစံ။ နောက်ပိုင်းတွင် Horus, Osiris ၏သား, သူရှေသေဆုံးပြီးအလှည့်၌ဖါရောဘုရဖြစ်လာခဲ့သည်သည်မိမိအဘအပြစ်ဒဏ်။ " ရူပကတှေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကလူများနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ကိုသင်တို့သိကပြောပါတယ်။ ငါသည်ငါ့စာဖတ်သူကိုအလုံအလောက် Osiris ၏ဒဏ္ဍာရီ, ဇာတ်ကြောင်းက Universal ဘဝက Universal အတွက်အီဂျစ်သိပ္ပံဖြစ်ပါသည်ကမ္ဘာနှင့်လူသား၏ကြောင်းငါနှင့်အတူအကောက်ချက်ချရန်အကြံပြုကြောင်းဆိုပါစို့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကအောက်ပါအချက်များကိုမပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ Geb နှင့် Nut Infinity, သခင်ဘုရားက, Absolute ၏ကမ္ဘာပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Infinity နှစ်ခုရှုထောင့်ရှိပါတယ်အာကာသလက်နက်ဖြစ်၏ (GED) နှင့်ထာဝရ Motion သို့မဟုတ်သန့်စင်သောဘုရားသခင့ရူ (Nut) ။ ကျနော်တို့ GED ကမ္ဘာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပစ္စည်းနှင့် Nout အဆိုပါသန့်စင်သောကမ္ဘာဦးဝိညာဉျတျောအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ကမ္ဘာနှင့်တက္ကသိုလ်များစေရန်, ဝိညာဉ်တော်သည်-အရေးပါသို့မဟုတ် GED-Nut ပို. ပို. သိပ်သည်းအစီအစဉ်များမှအမြင့်ဆုံးသိမ်မွေ့အဆင့်ဆင့်မတူညီဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စကြဝဠာကြီးမြတ်အဆုံးမရှိတဲ့တိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကမ္ဘာ၌နေသော Osiris, Isis, ရှေ, Nephthys ၏မွေးဖွား။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်သို့ဤနွယ်ဖွားခုနှစ်, Osiris 14 အစိတ်အပိုင်းများသို့ဖြတ် Isis သူ့ကိုအသက်ကိုပေးတော်မူပြီးနောက်ခံခဲ့ရသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို animating ဝိညာဉျတျော၏အလားအလာမြင်စိတ်ကို differential (Osiris) ၏စကားရပ်ခွင့်ပြုတစုံတခုအတွက်ပုံစံ (Isis) ပစ္စည်းခွဲခြား။ ရှေခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို (မြင်နိုင် Isis) အသစ်တဖန်မွေးဖွားရန်ခွင့်ပြုသဘာဝတရား၏အဖျက်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ ရှေတက္ကသိုလ်, ကမ္ဘာနှင့်လူသား၏သည် Periodic ပြန်လာခွင့်ပြုသမျှသောအနက်ရောင်တွင်း, ထိုကဲ့သို့သောယူဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်သေဆုံးမှု၏ဖြစ်တယ်။ Horus သည့်မိုနတ် Osiris-Isis (ဝိညာဉျတျော-ကိစ္စ), အဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှတဆင့်လူ့ဇာတ်ခုံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နှင့်သတိရှိရှိသူ့ဖခင် Osiris (ဘုရားသခင့ဘုရားဖြစ်လာ) ၏နိုငျငံတျောသညျမှပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ပညာသည်များ၏အကူအညီ (Thoth) နှင့်အတူဤ။ ဒါ့အပြင်အီဂျစ် Osiris-Horus triad metaphase-Isis ခေတ်သစ်သိပ္ပံနည်းကျယူနစ်များ၏ကိစ္စစွမ်းအင်-သတိပြန်လည်လည်ပတ်။ ရှုပ်ထွေးသတ္တဝါနှင့်အမှုအရာ၏သဘာဝပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာစေရန်, ရှုပ်ထွေးခြင်း, စီစဉ်ထားအရာများအတွက်ရိုးရှင်းသောဒြပ်စင်အတွက်သစ်တစ်ခုရှုပ်ထွေးဝေယူနှင့် reformulate ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏အမျှင်, ယင်း၏အရောင်စသည်တို့နှင့်အတူဥပမာအဝတ်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် သမျှသောရိုးရှင်းသောဒြပ်စင်ပေမယ့်အရာနောက်ဆုံးတွင် object တစ်ခု, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသော entity ဖြစ်လာဖြစ်ကြသည်။ ဒါကသဘာဝမယျ။ ဒါကရှေးအဲဂုတ္တုပြည်၌ဓာတုဗေဒနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကိုဖန်ဆင်းနှင့်ဤအဘယ်အရာကိုသိပ္ပံယနေ့ယျ။ Tayou သူတိုင်းအလှည့်မှာကယ်တင်သောအရာကိုနားမလည်ကြဘူး။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ The New Project မှဖာပေးထားသောစကေး, သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအဆောက်အအုံ, နည်းပညာ, ငွေကြေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ (5) copy ဖို့လိုပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီအာဖရိကနိုင်ငံတွင်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည် Thoth-Hermes Trismegistus Institute မှဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်ပါး ဂျာမနီ။ ဤသည်, တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေစိုက်စခန်း, ဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အာဖရိကအဟန့်စစ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်အာကာသအတွင်းပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သည့်ရန်သိပ္ပံနည်းကျ, နည်းပညာနှင့်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။ Space ကိုပိရမစ်၏အဓိကနိယာမဖြစ်ခဲ့သည်။ (6) (7) အာကာသကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကအနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏တိုက်ကြီးအပြင်ဘက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူမျိုးအတွက်နေရာတိုင်းကိုတွေ့မြင်သမျှသောဤအသေးပိရမစ်, ရှေးဟောငျးအီအဲဂုတ္တုတန်ခိုးအာနုဘော် secure မှသမိုင်းကမ္ဘာ့အားထုတ်မှုရှိကြ၏။ (8) ဒီတော့ကျနော်တို့အနောက်တိုင်းသိပ္ပံကူးယူမည်မဟုတ်ဟုပြောသူကို Inertia နှင့်နယူးအာဖရိကပြိုင်ဘက်၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် New Light အာဖရိကန်လူအပေါင်းတို့၏အမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။
ချဒ်, Debi အတွက်နောက်ဆုံးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် (1) ကနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ 111 များ၏ထောက်ခံမှုကနေအကျိုးခံစားရဖို့။ Debi ဤ subservience ချဒ်အတွက်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏မြင့်တက်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့လျှင်အဆိုပါဖြစ်ရပ်များကိုပြောပြလိမ့်မယ်
(2) ပြင်သစ်မှသူ၏ပထမဆုံးအလည်အပတ်ခရီးတွင်, ဘီနင်ပက်ထရစ် Talom ၏သမ္မတသစ်မိမိတိုင်းပြည်ကလိုအပ်ပါတယ် frameworks ပဒေသာပင်များလည်းမှပဲရစ်လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြိုင်ဘက်ပဲရစ်၏အကူအညီမပါဘဲ, Beninese န်ဆောင်မှုများကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ထို့ကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုဘီနင်လောကီသားတို့သည်စုဆောင်းနိုင်သောငြင်း
(3) ဥရောပအမျိုးအစားလူတို့အဘို့အာဏာရလူတန်းစားများ၏ညှို့, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် endogenous စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အခြားနည်းလမ်းမြှင့်နိုင်ငံရေးငြင်းဆန်၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အင်ဂိုလာ၌ဤညှို့စူးရှသောအညီအမျှအရည်အချင်းနှင့်ဇာတိပေါ်တူဂီကန်ထရိုက်တာပိုမိုနှစ်သက်နေသည်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကြည့်ပါ။ အခုကျနော်တို့ bourgeois လူတန်းစားတိုက်ပွဲအင်ဂိုလာသမီးတို့ပင်လူမှုရေးလူတန်းစားအားလုံးသည်အခြားအလုပ်လက်မဲ့လူငယ်တစ်အင်ဂိုလာနှင့်အတူဥရောပအမျိုးအစားနှင့်အတူစုံတွဲအတွက်ရရကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်မည်။ ဒါဟာသဘာဝတရားအတိုင်းအနက်ရောင်လုပ်ငန်းခွင်၏ဖကျြဆီးခွငျး, အာဖရိကမှာအာဏာရအထက်တန်းလွှာများ၏မျိုးဗီဇသည်ငါ့ကိုပုံရသည်။ ကျနော်တို့က Sphinx နှင့်ပိရမစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးနောက်ရှေးဟောငျးအီကိုအဲဂုတ္တုနှင့်အတူအပြိုင်တွင်ဤအချက်များကိုထည့်သွင်းပါလျှင်, ငါတို့သည်နောက်တဖန်နောက်ပိုင်းမှာဥရောပတိုက်ဟုခေါ်တွင်သူတို့အဘို့ဒီတူညီတဲ့ညှို့စောငျ့ရှောကျ, အဲဂုတ္တုပြည်၌ miscegenation အရှိန်သိရသည်။ ဤသည် Fusion ကိုအလှည့်၌, ဂရိသိမ်းပိုက် facilitated ။ ဤအလက်ဇန္ဒြီးယား၏စာကြည့်တိုက်များနှင့်အီဂျစ်ဗိမာန်၌သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အတတ်ကျမ်း၏လုယက်များ၏မီးလောင်ရာလာတော့သည်ရသောရောမရဲ့ကိုလိုနီမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဖာရောဘုရင်၏ဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုပြီးသားမသိစိတ်ဆက်ခံရှာဖွေနေသည်, မိမိမစ်ရှင်ပြီးစီးတော်မူပြီးမှ။ သာယနေ့အချက်ပါ။ ဒါဟာအာဖရိကယုတျညံ့သညျ့ stupefies နှင့်သူ့ဟာသူပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များသည်ဆိုကရေးတီးမှလှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကဗျာဆရာများသည်ဟိုးမားနှင့်ဗာဂျီးလ်၊ ယူဖိုလက်စ်၊ Pythagoras, Plato and Aristotle, ငါတို့သမိုင်းပညာရှင် Tite-Live, Salluste သို့မဟုတ် Tacitus စံပြ, ငါတို့စပီကာ, Demosthenes သို့မဟုတ် Cicero အဖြစ်ယူရှိမရှိ, ငါတို့ဆရာဝန်တွေက Hippocrates ကိုလေ့လာနေဆဲ၊ ငါတို့ကုဒ်တွေက Justinian ဘာသာပြန်ပေးတယ်ဆိုတာပါ။ ထိုနည်းတူစွာ, ရှေးဟောင်းကိုလည်းလေ့လာ, အတုနှင့်ကူးယူထားတဲ့ရှေးဟောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ယုတ္တိဖြစ်နိုင်ပါတယ်? လူအားလုံးဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြဘူး။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှနာကျင်စွာသိမ်းပိုက်ထားသောဗဟုသုတကို၎င်းင်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေတွင်မှတ်သားထားပြီး၎င်းသည်မျိုးဆက်သစ်များနှင့်အတူသေဆုံးနိုင်ပါသလား။ "Isis တွင်ကိုးကားထားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိသမ္မာကျမ်းစာမှ Jacolliot ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
(6) "ဒါဟာသဘာဝတရား၏ဖန်တီးမှုနိယာမသင်္ကေတများနှင့်လည်းဂျီသြမေတြီ, သင်္ချာ, နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်နက္ခတ္တဗေဒ၏အခြေခံမူတစ်ခုသရုပ်ဖော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းသည်နက်နဲသောအရာများကိုပြည့်စုံစေသည့်မှောင်မိုက်ဆုတ်ခွာမှု၌ထူးခြားသောဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်ပြီးတော်ဝင်မိသားစုဝင်များ၏အစပြုအခမ်းအနားများကိုမကြာခဏမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ စကော့တလန်တော်ဝင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ပါမောက္ခ Piazzi Smyth မှဂျုံမှုန့်၏အသေးအဖွဲအခန်းကဏ္ brought မှနှိမ့်ချသောပုံဆောင် sarcophagus သည်နှစ်ခြင်းခံရန်ရန်ပုံငွေဖြစ်ပြီးထိုမှထွက်ခွာသည့်အခါနီရိုဖိုက်သည်“ တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်း” နှင့်နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည် "။ (Isis ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်)
(၇) "Hermes of Books တစ်ခုမှဤပိရမစ်အချို့ကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌မြင့်တက်လာသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူတို့၏လှိုင်းများသည်သူတို့၏အခြေအနေတွင်အချည်းနှီးသောအမျက်ဒေါသကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့သည်" ဤအချက်ကဒေသ၏ပထဝီဝင်လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေးဟောင်း“ စပါးကျီများ”၊ “ နက္ခတ်ဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးစခန်းများ” နှင့်“ တော်ဝင်သင်္ချိုင်းဂူများ” ဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သည်။ အခြားသဲကန္တာရ။ ဤသည်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ သာလွန်သောရှေးဟောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးအီဂျစ်ပညာရှင်များကရက်ရက်စက်စက် ၀ န်ခံခြင်းဖြစ်သည်” (Isis ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်)
(၈)“ Ophic နှင့် heliolatric အစွန်းရောက်တို့၏မူလအစ၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များ၏ပုံသဏ္,ာန်သည်အီဂျစ် Trismegistus Hermes သို့ပြန်သွားရမည်။ Hermetic စာအုပ်တွေမှာဒီအချက်အလက်တွေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ခေတ်သစ်စာရေးဆရာများသည်ရှေးခေတ်ဒဏ္myာရီများနှင့်ရှေးဟောင်းဓလေ့ထုံးစံများကိုသူတို့၏ခေတ်ပြိုင်များအားသင်ကြားပေးသူများအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိခြင်းသို့မဟုတ် ပို၍ ပင်သိရှိခြင်းလော။ သိသာထင်ရှားသည့်အချက်နှစ်ချက်လိုအပ်သည်မှာပထမတစ်ခုမှာပျောက်ဆုံးနေသောHermèsစာအုပ်များဖြစ်သည်။ နှင့်ဒုတိယသူတို့ကိုနားလည်ရန်သော့ရှိသည်, သောကြောင့်သူတို့ကိုဖတ်ရှုဖို့မလုံလောက်သောကြောင့်။ ထိုသို့မအောင်မြင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အလားတူအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပထဝီပညာရှင်များသည်နိုင်းမြစ်၏အရင်းအမြစ်များကိုအချည်းနှီးသောသုတေသနတွင်အချိန်မဖြုန်းသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များသည်မြုံသောထင်ကြေးများသို့ကျဆင်းသွားသည်။ အမှန်မှာအီဂျစ်သည်လျှို့ဝှက်နက်နဲရာခိုလှုံရာဖြစ်သည်။ သူသည် Des Mousseaux ဟုခေါ်သည့်အတိုင်း Hermes သည်“ postdiluvian မှော်အတတ်” ဟုတ်မဟုတ်ဆွေးနွေးရန်မရပ်မနားဘဲ၊ ပိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော antediluvian မှော်၏နိယာမ၊ သေချာသည်မှာသေချာသည်တစ်ခုမှာ၊ Hermes ၏စာအုပ်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အသုံး ၀ င်မှု - သို့မဟုတ်အီဂျစ်မှော်ပညာရှင်အားစွပ်စွဲထားသောစာအုပ်လေးဆယ်နှစ်၏ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများမှာငယ်ရွယ်သော Champollion မှအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့ကိုရည်ညွှန်းသည့် Champollion-Figéacကအတည်ပြုသည်။ (Isis ရှိ HP Blavatsky ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လစ်ဘရယ်အတွေး, လူးဝစ် Hartz ၏သမိုင်း။ နယူးမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအယ်ဒီတာ။
barry Goldwater: Editor ကို: စတီဖင် Shadegg: လတ်ြလပ် (စတီဖင် Shadegg အားဖြင့်) သူ၏ Flightplan Is
လျှို့ဝှက်ချက်အယူဝါဒ, HP က Blavatsky
သင့်တုန်ခါမှုကိုနားထောင်ခြင်း - Sonia Choquette (အသံ)